Mmiri dị ọcha na ịdị ọcha dị ọcha nwere ike ime ka nwa gị toro ogologo: ụmụaka nde 265 na-emetụta site n'ịkwụ ụgwọ n'ụwa nile - Ụwa 2022
Mmiri dị ọcha na ịdị ọcha dị ọcha nwere ike ime ka nwa gị toro ogologo: ụmụaka nde 265 na-emetụta site n'ịkwụ ụgwọ n'ụwa nile
Ndị nchọpụta achọpụtala ihe akaebe na mmiri dị ọcha na ncha abụghị naanị ihe dị mkpa maka ịdị ọcha n'ozuzu, kamakwa ọ nwekwara ike na-ekere òkè n'ikike uto na ụmụaka. Mgbe a nyochara data sitere na Bangladesh, Etiopia, Nigeria, Chile, Guatemala, Pakistan, Nepal, South Africa, Kenya, na Cambodia, ndị nchọpụta chọpụtara usoro na-agbanwe agbanwe. Ụmụaka na-erubeghị afọ ise ndị bi n'ụlọ ndị nwere ezi na ịdị ọcha ọkọlọtọ dị 0.5 centimeters ogologo karịa ụmụaka nọ n'ọnọdụ ibi ndụ na-adịghị mma.
Ọmụmụ ihe iri na anọ ahụ, nke ụlọ akwụkwọ London School of Hygiene & Tropical Medicine (LSHTM) na otu ọrụ ebere mba ụwa WaterAid duziri, hụrụ data sitere na ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụmụaka 10,000. Mgbe nyocha nke mpaghara ọ bụla, ndị nchọpụta chọpụtara na nke mbụ njikọ dị n'etiti ịdị ọcha na uto, nke ga-enye ihe akaebe na ịnweta ọrụ ka mma nwere ike inwe mmetụta dị ntakịrị ma dị ịrịba ama na uto nke ụmụaka.
Ihe karịrị nde ụmụaka 265 n'ụwa niile na-eyi egwu n'ihi uto na-adịghị mma yana mmetụta ahụike ogologo oge metụtara ya. Otu onye na-ahụ maka ahụike ọha na LSHTM na onye ndu nyocha akụkọ ahụ, Dr. Alan Dangour, kwusiri ike na idebe ọcha, mmiri dị ọcha, na ịdị ọcha nwere ike mechaa belata ọnwụ site na mgbaàmà dị ka afọ ọsịsa.
Dị ka Òtù Ahụ Ike Ụwa (WHO) si kwuo, ọrịa afọ ọsịsa bụ nke abụọ na-akpata ọnwụ ụmụaka na-erubeghị afọ ise. N'agbanyeghị na afọ ọsịsa bụ nke a na-egbochi ma nwee ike ịgwọta ya, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ijeri 1.7 na-arịa kwa afọ, na n'ime ndị ahụ, ụmụaka 760,000 na-erubeghị afọ ise na-anwụ. Ọ bụ ihe kacha akpata erighị ihe na-edozi ahụ́ maka ụmụaka ndị a, a pụkwara igbochi ya ngwa ngwa site n'inweta mmiri ọṅụṅụ dị ọcha, idebe ihe ọcha zuru oke, na usoro ịdị ọcha n'ozuzu ya.
"Ihe anyị chọtara site n'ịchịkọta ihe akaebe niile na nke mbụ bụ na e nwere ntụnye na ntinye aka na-akwalite uto ụmụaka na nke ahụ dị ezigbo mkpa," Dangour gwara BBC News.
Dangour kwuru na nchoputa a bụ isi ihe iji gboo "ibu nke erighị ihe na-edozi ahụ" maka ụmụaka. Mgbe ndị mmadụ na-erijughị afọ, ha na-efunahụ ikike nke ịnọgide na-enwe ike anụ ahụ dị ka uto, iguzogide ọrịa, ịgbake site na ọrịa, mmụta, ọrụ anụ ahụ, afọ ime, na ịmụ nwa n'ime ụmụ nwanyị, dịka Òtù Na-ahụ Maka Ụmụaka nke Mba Ndị Dị n'Otu (UNICEF) siri kwuo. N’Ebe Ndịda Eshia, pasent 46 nke ụmụaka ndị na-erubeghị afọ ise adịghị ibu, ebe n’ebe ndịda Sahara Africa, pasent 28 nke ụmụaka erughị eru. "A na-ahụ ụkpụrụ ndị yiri nke ahụ na njupụta nke nkwutọ-ebe ịdị elu ụmụaka dị ala maka afọ ndụ ha," dịka data UNICEF Progress For Children si kwuo.
Nnyocha 14 ahụ gosipụtara njikọ doro anya n'etiti ogo mmiri ọ drinkingụ drinkingụ ụmụaka, afọ ọsịsa, uto, na ọrịa ugboro ugboro.
"Ọ bụ ihe ezi uche dị na ya na ekwesịrị inwe njikọ n'etiti mmiri ruru unyi, afọ ọsịsa na nsonaazụ uto mana ọ bụ ihe na-adọrọ mmasị na ọ dịtụbeghị mgbe e gosipụtara ya," Dangour kwuru. "Ọkara centimita adịghị ada ụda nke ukwuu mana na atụmatụ anyị na-abawanye na uto na-adaba na mbelata nkwụsị nke ihe dịka 15%, nke dị ezigbo mkpa."